စီရော်နယ်ဒိုကို အရန်ခုံမှာပဲထားလို့ စာချုပ်ချိုးဖောက်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ဂျုဗင်တပ်
July 28, 2019 Zayar Phyo Han Serie A 0
È£³¯µÎ '¿À´ÃÀº º¥Ä¡·Î ½ÃÀÛ' (¼­¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) ±èµµÈÆ ±âÀÚ = 26ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼º»êµ¿ ¼­¿ï¿ùµåÄÅ°æ±âÀå¿¡¼­ ¿­¸° ÇÏ³ª¿øÅ¥ ÆÀ K¸®±×¿Í À¯º¥Åõ½º FCÀÇ Ä£¼±°æ±â. À¯º¥Åõ½ºÀÇ È£³¯µÎ°¡ º¥Ä¡¿¡¼­ °æ±â ½ÃÀÛÀ» ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Ù. 2019.7.26 [email protected]/2019-07-26 21:11:47/
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှာကစားခဲ့တဲ့ ခြေစမ်းပွဲစဉ်မှာ စူပါစတားကစားသမားစီရော်နယ်ဒိုကို ၀င်မကစားစေဘဲ အရန်ခုံမှာပဲထားခဲ့တာကြောင့် စီးရီးအေချန်ပီယံဂျူဗင်တပ်ဟာ စာချုပ်ပါသဘောတူညီမှုတစ်ခုကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်းပွဲစီစဉ်သူဘက်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်ဟာ မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းက တောင်ကိုရီးယားလိဂ် All-Star အသင်းနဲ့ ဆိုးလ်ကမ္ဘာ့ဖလားကွင်းမှာ ခြေစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၃-၃ သရေကျခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲကို ပရိသတ် ၆၃၀၀၀ လောက်တက်ရောက်အားပေးခဲ့ပေမယ့် စီရော်နယ်ဒိုပါဝင်ကစားခြင်းမရှိလို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီပွဲကိုစီစဉ်တဲ့ TheFasta အေဂျင်စီက စီရော်နယ်ဒိုကိုမပါစေတဲ့ ဂျူဗင်တပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သူတို့မသိကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ “စီရော်နယ်ဒိုဟာ ပွဲချိန်အတော်များများပါဝင်ကစားမယ်လုိ့ ဂျူဗင်တပ်အသင်းက သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန်အတော်များများဆိုတဲ့သဘောက ပွဲရဲ့အနည်းဆုံး ၄၅ မိနစ်ကစားမယ်ဆိုတာပါ။ ဒုတိယပိုင်းလူစာရင်းမှာ စီရော်နယ်ဒိုမပါဘူးဆိုတာ သိရပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော်တို့ဟာ စာချုပ်မှာပါထားတဲ့အတိုင်း စီရော်နယ်ဒိုကိုထည့်ကစားဖို့ ဂျူဗင်တပ်ကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ နည်းပြနဲ့ကစားသမားက စာချုပ်ပါအချက်ကိုသိပေမယ့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကြောင့် စီရော်နယ်ဒိုမကစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း ကလပ်ဘက်က ပြောလာပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကို ဂျူဗင်တပ်ဘက်က တုံ့ပြန်မှုမလုပ်ခဲ့ပါဘူး”လို့ TheFasta အေဂျင်စီရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားလိဂ်အဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တဲ့ ကေလိဂ်ကတော့ စီရော်နယ်ဒိုပါဝင်ကစားခြင်းမရှိလို့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး ပရိသတ်တွေကို တောင်းပန်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် TheFasta အေဂျင်စီကနေ လျော်ကြေးတောင်းမယ်လို့လည်း ကေလိဂ်ရဲ့ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်နည်းပြဆာရီကတော့ ကစားသမားရဲ့ကြွက်သားပြသနာကြောင့် စီရော်နယ်ဒိုကို မထည့်တာလို့ ပွဲအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံ ဆိုးလျမွို့မှာကစားခဲ့တဲ့ ခွစေမျးပှဲစဉျမှာ စူပါစတားကစားသမားစီရျောနယျဒိုကို ဝငျမကစားစဘေဲ အရနျခုံမှာပဲထားခဲ့တာကွောငျ့ စီးရီးအခေနျြပီယံဂြူဗငျတပျဟာ စာခြုပျပါသဘောတူညီမှုတဈခုကိုခြိုးဖောကျခဲ့ကွောငျး ဒသေတှငျးပှဲစီစဉျသူဘကျက ထုတျဖျောပွောကွားလိုကျပါတယျ။ ဂြူဗငျတပျဟာ မကွာသေးခငျရကျပိုငျးက တောငျကိုရီးယားလိဂျ All-Star အသငျးနဲ့ ဆိုးလျကမ်ဘာ့ဖလားကှငျးမှာ ခွစေမျးခဲ့တာဖွဈပွီး ၃-၃ သရကေခြဲ့ပါတယျ။ အဲဒီပှဲကို ပရိသတျ ၆၃၀၀၀ လောကျတကျရောကျအားပေးခဲ့ပမေယျ့ စီရျောနယျဒိုပါဝငျကစားခွငျးမရှိလို့ စိတျပကျြလကျပကျြဖွဈခဲ့ကွပါတယျ။
အဲဒီပှဲကိုစီစဉျတဲ့ TheFasta အဂေငျြစီက စီရျောနယျဒိုကိုမပါစတေဲ့ ဂြူဗငျတပျရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြကို သူတို့မသိကွောငျး ကွညောခကျြထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ “စီရျောနယျဒိုဟာ ပှဲခြိနျအတျောမြားမြားပါဝငျကစားမယျလုိ့ ဂြူဗငျတပျအသငျးက သဘောတူညီခဲ့ပါတယျ။ ပှဲခြိနျအတျောမြားမြားဆိုတဲ့သဘောက ပှဲရဲ့အနညျးဆုံး ၄၅ မိနဈကစားမယျဆိုတာပါ။ ဒုတိယပိုငျးလူစာရငျးမှာ စီရျောနယျဒိုမပါဘူးဆိုတာ သိရပွီးတဲ့နောကျ ကြှနျတျောတို့ဟာ စာခြုပျမှာပါထားတဲ့အတိုငျး စီရျောနယျဒိုကိုထညျ့ကစားဖို့ ဂြူဗငျတပျကို တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။ နညျးပွနဲ့ကစားသမားက စာခြုပျပါအခကျြကိုသိပမေယျ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအခွအေနကွေောငျ့ စီရျောနယျဒိုမကစားနိုငျဘူးဆိုတဲ့အကွောငျး ကလပျဘကျက ပွောလာပါတယျ။ နောကျပွီးတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့တောငျးဆိုမှုတှကေို ဂြူဗငျတပျဘကျက တုံ့ပွနျမှုမလုပျခဲ့ပါဘူး”လို့ TheFasta အဂေငျြစီရဲ့ကွညောခကျြထဲမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
တောငျကိုရီးယားလိဂျအဖှဲ့ခြုပျဖွဈတဲ့ ကလေိဂျကတော့ စီရျောနယျဒိုပါဝငျကစားခွငျးမရှိလို့ ကွညောခကျြထုတျပွနျပွီး ပရိသတျတှကေို တောငျးပနျမှုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ TheFasta အဂေငျြစီကနေ လြျောကွေးတောငျးမယျလို့လညျး ကလေိဂျရဲ့ကွညောခကျြမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ ဂြူဗငျတပျနညျးပွဆာရီကတော့ ကစားသမားရဲ့ကွှကျသားပွသနာကွောငျ့ စီရျောနယျဒိုကို မထညျ့တာလို့ ပှဲအပွီးသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။